Raad Raac News Online – Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xilki ka qaaday Wasiirkiisa Arrimaha Diinta oo ku lug yeeshay Mooshin ka dhan ah isaga
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xilki ka qaaday Wasiirkiisa Arrimaha Diinta oo ku lug yeeshay Mooshin ka dhan ah isaga
Faarax February 16, 2017 Comments Off on Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xilki ka qaaday Wasiirkiisa Arrimaha Diinta oo ku lug yeeshay Mooshin ka dhan ah isaga
Kulan uu shir guddoominaayay Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa waxaa xilkii looga xayuubiyay Wasiirka Diinta & Awqaafta Koonfur Galbeed, Axmed Maxamed Barre (Macalin Barre).
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed iyo Golihiisa Wasiirada oo maanta shir ku yeeshay Magaalada Baydhabo, ayaa waxaa laga soo saaray awaamiir xilka looga xayuubinayo Wasiirka Diinta & Awqaafta.
Wasiirka Beeraha & Waraabka Koonfur Galbeed, Maxamed Xasan Fiqi oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Gobolka Baay, ayaa Saxaafadda u akhriyay xeer madaxweyne oo xilkii looga qaaday Wasiirkii Diinta & Awqaafta.
Wasiirka Beeraha, ayaa sheegay in shakhsiga ka tirsan Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed uu xilka ku waayi karo, qoraal afka ah, isagoo qoraal keena iyo isagoo Warbaahinta ka sheega in xilkaasi uu iska casilay.
“Ninka ka tirsan Golaha Wasiirada wuxuu xilka ku wayn karaa qoraal af ah, isagoo qoraal keena iyo isagoo idaacadaha war siiya, iyadoo qodobadaas la cuskanayo laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 16-ka February, 2017, Wasiirka Awqaafta & Arrimaha Diinta waxay Golaha Wasiirada go’aansadeen in xilkii uu u haayay Maamulka Koonfur Galbeed ee Wasaaradda laga qaado.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka xilka laga qaaday oo sidoo kale xubin ka ah Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa uu sheegay in uu ka mid yahay Xildhibaanada Koonfur Galbeed, ee qorsheynaysa in ay mooshin ka keenaan Madaxweyne Shariif Xasan.
Macalin Barre, ayaa ku goodiyay kolka uu furmo Fadhiga Baarlamaanka Koonfur Galbeed, in markaasi ay Guddoonka Baarlamaanka u gudbin doonaan mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha.